--Iintsholongwane-iGuangzhou Hongwu Material Technology Co., Ltd.
Ngophuhliso lwezenzululwazi kunye netekhnoloji kunye nokuphuculwa kwemigangatho yokuphila kwabantu, imfuno yabantu yezinto zokulwa neentsholongwane kunye neemveliso ziya kuqhubeka zisanda. Ukuze kuphuculwe impilo yabantu, kuphuculwe indawo yokuhlala neyokusebenza, uphando kunye nophuhliso lwezinto ezintsha, ezinobuchule obuphezulu, ezingenatyhefu, ezingenabumba kunye nezixhobo zokulwa neentsholongwane ezineempawu zokulwa neentsholongwane ezihlala ixesha elide ziye zaba yindawo yophando yangoku. Izinto zokulwa ne-antibacterial zesilivere zineempawu zokusebenza okuphezulu, ukubanzi okubanzi, ubuthi obuphantsi, ukungabi nasongo, indawo engangcolisiyo, ukhuseleko kunye nokukhuselwa kwendalo, njl.
Njenge-nanomaterial, i-nanosilver inefuthe levolumu, isiphumo somphezulu, isiphumo sobungakanani be-quantum kunye ne-macroscopic quantum tunnel effect, kwaye inamandla amakhulu ophuhliso kunye nexabiso lesicelo kwicandelo le-superconductivity, photoelectricity, antibacterial, kunye ne-catalysis.
Iindidi ezimbini zebacteria, i-Escherichia coli kunye ne-Staphylococcus aureus, zikhethwe njengabameli bokufumana ubungakanani kunye nobungakanani beempawu zokulwa ne-antibacterial ye-nano-silver colloid. Iziphumo zovavanyo zaqinisekisa ukuba i-nano colloid yesilivere eveliswe yi-Hongwu Nano ineempawu ezifanelekileyo zokulwa neentsholongwane ngokuchasene ne-bacteria ye-Gram-negative, i-Gram-positive bacteria kunye nokubumba. Kwaye iipropathi zokulwa neentsholongwane zihlala zomelele.
Ukusetyenziswa okuphambili kwe-nano colloid yesilivere akuphelelanga koku kulandelayo:
Iyeza: i-antibacterial kunye ne-anti-infection, ukulungiswa kunye nokuhlaziywa kwezicubu;
Electronics: ukutyabeka conductive, inki conductive, chip ukupakisha, electrode unama;
Izinto eziyimfuneko mihla le: anti-static, anti-bacterial coating / ifilimu;
Izinto ezincedisayo: i-fuel cell catalyst
Izinto zokutshintshisa ubushushu; izinto zokwambathisa ezikhethiweyo.
Indawo yokuhlala enempilo sele iyinjongo yabantu. Ke ngoko, ii-microorganism zokusingqongileyo eziyingozi kwimpilo yabantu zikwatsala umdla wabantu
Ngalo lonke ixesha kuphuhliso lwezenzululwazi kunye netekhnoloji, izixhobo ze-nano antibacterial zisetyenziswa ngokubanzi ekucoceni umoya, kunyango lwelindle,
iimveliso zeplastikhi, iingubo zokwakha, impilo yezonyango kunye nezinye iinkalo.
Ukwahlulahlulwa kwezinye zezinto eziqhelekileyo ezisetyenziswayo ze-nano antibacterial
1. Izinto ze-nano antibacterial
a. Ii-nanoparticles zesilver (kwifom yomgubo)
b. Isilver nanoparticles yokusasazeka (kwifom engamanzi)
c. Intsabalalo yesilivere engenambala engenanto (kwifom engamanzi)
2.Metal oxide nano izinto antibacterial
b. I-CuO Copper oxide nanoparticles
c. I-Cu2O yeNdebe ye-oxide nanoparticles
d. I-TiO2 Titanium dioxide nanoparticles (iphotocatalysis)
Ukusetyenziswa kwezixhobo ze-nano antibacterial
1.I-Nano antibacterial coating
Ukuthintela i-antibacterial kunye ne-mildewproof, ukucoceka komoya kunye ne-antifouling yokucoceka kokucoceka kuphuhliswe ngokongeza ezi zinto zikhankanywe ngasentla kwizinto zokulwa ne-antibacterial,
2. Iiplastiki zeNano antibacterial
Ukongezwa kwesixa esincinci sezinto zokulwa neentsholongwane kunokunika iplastikhi yexesha elide ye-antibacterial kunye ne-bactericidal uwezo.Iplastiki yezinto zokulwa ne-antibacterial eyongezwe isixa se-1% ingaba kwiplastiki yexesha elide yokulwa neentsholongwane kunye nokuzala.
Ukusetyenziswa kweeplastikhi zokulwa neentsholongwane kubandakanya izixhobo zokutya, unxibelelwano nge-elektroniki, izixhobo zekhaya, izinto zokwakha, iiofisi, iithoyi, ukhathalelo lwempilo, kunye neemveliso zekhaya.
Kuba ifayibha iyakwazi ukufunxa ii-microorganisms ezininzi, ukuba iqondo lobushushu lifanelekile, ii-microorganism ziyakuphindaphindeka ngokukhawuleza, oko ke kubangele ukonzakala okuninzi emzimbeni womntu.
I-Textile fiberantibacterial sisixhobo esibalulekileyo sokuqinisekisa impilo yabantu.
4. Iiceramics zeNano antibacterial
Umphezulu antibacterial of tableware yodongwe kufezekiswa ngokongeza izinto nano antibacterial.
5. Izinto zokwakha zeNano antibacterial
Izakhiwo zale mihla zinokuxinana komoya okuhle, ubushushu abonelanga kunye nomoya ongenisa umoya, kwaye iindonga zinokuba ngumbethe kwaye zifumile, ezibonelela ngeemeko ezifanelekileyo zokuzala kunye nokwanda
Ukusetyenziswa kwezixhobo zokwakha ezibulala iintsholongwane, ukutyabeka okulwa neentsholongwane kunye nepeyinti elwa neentsholongwane kungalinciphisa kakhulu izinga lokusinda kweentsholongwane kumgangatho wefanitshala,
Iindonga zangaphakathi kunye nomoya wangaphakathi, eyindlela efanelekileyo yokunciphisa amathuba osulelo lwe-bacterial cross kunye nosulelo lokudibana.